Market Research Association - Page3of 8 - Market Research Association
(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဈေးကွက် သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းမှတ်တမ်းအပိုင်း (၂)
ဦးမျိုးဝင်းထွန်း (Senior Research Manager, MMRD) မှ ဈေးကွက်သုတေသနအသင်းရဲ့ ရှေ့ဆက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သောဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့ဖြန့်ဖြူး ပေးစေချင်သည်ဆိုသည့် သဘောထားတောင်းခံသည့် အစီအစဉ်အား ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Continue reading “(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဈေးကွက် သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းမှတ်တမ်းအပိုင်း (၂)”
(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဈေးကွက် သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းမှတ်တမ်းအပိုင်း (၁)
(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၀၉:၀၀) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI ၌ ဈေးကွက်သုတေသန အသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို တက်ရောက်သူ ( ၁၉၄ ) ဉီးရှိခဲ့ပြီး အုပ်စုအလိုက်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Continue reading “(၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဈေးကွက် သုတေသနအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်းမှတ်တမ်းအပိုင်း (၁)”
1st Annual General Meeting of Market Research Association (Yangon) & Signing Ceremony of Partnership Agreement between ESOMAR World Research and Market Research Association (Yangon)
Market Research Association has been found in 2018 with the core aim of evolving and enhancing the development of Myanmar’s market research industry and research consultants. The association aims to bring together all research agencies in Myanmar to cooperate in establishing Myanmar socio-economic indicators and to distribute professional knowledge and procedures of market research among the members.
Continue reading “1st Annual General Meeting of Market Research Association (Yangon) & Signing Ceremony of Partnership Agreement between ESOMAR World Research and Market Research Association (Yangon)”